John 7 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Shure kwezvinhu izvi Jesu wakafamba muGariri; nokuti wakanga asingadi kufamba muJudhiya, nokuti vaJudha vakanga vachitsvaka kumuvuraya.
Zvino mutambo wavaJudha wamatumba wakanga wava pedo.
Naizvozvo vanun'una vake vakati kwaari: Ibvai pano, muende Judhiya, kuti vadzidzi venyu vavonevo mabasa enyu amunoita.
Nokuti hakuna munhu unoita chinhu muchivande, kana iye amene achitsvaka kuzikamwa pachena. Kana iwe uchiita zvinhu izvi, zviratidze kunyika.
Nokuti kunyange navanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari.
Naizvozvo Jesu akati kwavari: Nguva yangu ichigere kusvika; asi nguva yenyu inogara yakagadzirwa.
Nyika haingakuvengiyi imwi; asi ini inondivenga, nokuti ndinoipupurira, kuti mabasa ayo akaipa.
Kwirai imwi kumutambo uyu; ini handisati ndokwira kumutambo, nokuti nguva yangu ichigere kuzadzisika.
Wakati areva zvinhu izvozvi kwavari, wakagara Gariri.
Asi vanun'una vake vakati vakwira, iyevo pachake akabva okwira kumutambo, asingaendi pachena, asi panenge sapakavanda.
Zvino vaJudha vakamutsvaka pamutambo, vakati: Uripiko iye?
Kun'un'una kukuru kukavapo pakati pechaunga pamusoro pake, vamwe vachiti: Wakanaka; asi vamwe vachiti: Kwete, asi unotsausa chaunga.
Kunyange zvakadaro kwakanga kusinomunhu waitaura pachena pamusoro pake, nokutya vaJudha.
Zvino kwakati pava pakati pomutambo, Jesu akakwira kutembere, akadzidzisa.
Naizvozvo vaJudha vakashamiswa, vachiti: Munhu uyu unoziva seiko magwaro, asina kumbodzidza?
Jesu akavapindura, akati: Dzidziso yangu haizi yangu, asi yake wakandituma.
Kana munhu achida kuita kuda kwake, uchaziva zvedzidziso kana ichibva kunaMwari, kana kuti ndinotaura zvemusoro wangu.
Unozvitaurira nezvake, unotsvaka kurubidzwa kwake; asi unotsvaka kurumbidzwa kowakamutuma, ndiye wechokwadi, hapana kusarurama maari.
Mozisi haana kukupai murairo here? Asi hakunomumwe wenyu unochengeta murairo. Munotsvakireiko kundivuraya?
Chaunga chikapindira chikati: Unomweya wakaipa iwe; ndianiko unotsvaka kukuvuraya?
Jesu akapindura akati kwavari: Ndakaita basa rimwe, mukashamiswa mose.
Naizvozvo Mozisi wakakupai dzingiso, (kusiri kuti ndeyaMozisi, asi yamadzibaba); zvino imwi nemusi wesabata munodzingisa munhu.
Zvino kana munhu akagamuchira dzingiso nesabata, kuti murairo waMozisi urege kuputswa, ko imwi monditsamwira nokuti ndaporesa munhu zvakakwana nemusi wesabata here?
Musatonga nezvinovonekwa, asi tongai kutonga kwakarurama.
Naizvozvo vamwe vaveJerusarema vakati: Ko haazi iye wavanotsvaka kuvuraya here?
Asi tarirai, unotaura pachena vasingarevi chinhu kwaari. Ko vakuru vanoziva kwazvo here kuti ndiye Kristu?
Zvino uyu tinoziva kwaanobva; asi Kristu kana achisvika, hakunomunhu ungaziva kwaanobva.
Zvino Jesu akadanidzira mutembere, achidzidzisa, achiti: Imwi mose munondiziva, uye imwi mose munoziva kwandakabva; handina kuvuya zvomusoro wangu, asi wakandituma ndowechokwadi, wamusingazivi imwi.
Ini ndinomuziva, nokuti ndinobva kwaari, uye ndiye wakandituma.
Naizvozvo vakatsvaka kumubata, asi hakuna munhu wakaisa ruvoko paari, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika.
Asi vazhinji vechaunga vakatenda kwaari, vakati: Kana Kristu achizosvika, ungaita zvishamiso zvizhinji kunezvizvi zvakaitwa nouyu here.
Zvino vaFarisi vakanzwa vanhu vazhinji vachin'un'una zvinhu zvakadaro pamusoro pake; vaprista vakuru navaFarisi vakatuma vatariri kundomubata.
Ipapo Jesu akati kwavari: Ndichiri nemwi chinguvana, ndoenda kunowakandituma.
Imwi muchanditsvaka, mukasa\_add ndi\_add*wana; uye apo pandiri, imwi hamungasvikipo.
Zvino vaJudha vakataurirana, \_add vachiti\_add*: Unoda kuendepiko, kwatisingazomuwani? Ko unoda kuenda kuna vakapararira pakati pavaGiriki, kuti andodzidzisa vaGiriki here?
Ishokoiko iri \_add raanoti\_add*: Muchanditsvaka, asi hamungandiwani, nepandiri, imwi hamungasvikipo?
Zvino nezuva rokupedzisira, guru romutambo, Jesu wakasimuka, akadanidzira, akati: Kana aninani anenyota, ngaauye kwandiri, amwe.
Unotenda kwandiri, sezvakarebwa norugwaro, mudumbu make muchaerera nzizi dzemvura mhenyu.
Asi izvi wakareva zvoMweya, waizogamuchirwa navo vaitenda kwaari, nokuti Mweya Mutsvene wakanga asati \_add avapo\_add*, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa.
Naizvozvo vazhinji vechaunga vakati vachinzwa shoko iri vakati: Zvirokwazvo uyu muporofita.
Vamwe vakati: Uyu ndiye Kristu. Asi vamwe vakati: Ko Kristu ungabva Gariri here?
Rugwaro haruna kureva here kuti Kristu uchabva kuzvizvarwa zvaDhavhidhi, napamusha weBhetirehemu, paiva naDhavhidhi?
Naizvozvo pakava nekupesana pakati pechaunga pamusoro pake.
Vamwe vavo vakanga vachida kumubata; asi kwakanga kusina wakaisa mavoko kwaari.
Zvino vatariri vakavuya kuvaprista vakuru nokuvaFarisi; ivo vakati kwavari: Nemhaka yei musina kuvuya naye?
Vatariri vakapindura, \_add vakati\_add*: Hakuna munhu wakatongotaura somunhu uyu.
Zvino vaFarisi vakavapindura, \_add vakati\_add*: Nemwivo matsauswa kanhi?
Kunomumwe wavakuru nowavaFarisi wakatongotenda kwaari here?
Asi chaunga ichi chisingazivi murairo, chakatukwa.
Nikodhimo, uya akavuya kwaari vusiku, ari mumwe wavo, akati kwavari:
Murairo wedu unotonga munhu, usati wambomunzwa, nokuziva chaanoita here?
Vakapindura vakati kwaari: Ko newevo uri weGariri here? Nzvera, uvone kuti hakuna kumuka muporofita, unobva Gariri.
Ipapo mumwe nomumwe wakaenda kumba kwake.